Qays iyo Leyla | maktabadda | Af-Soomaaliga
Qays iyo Leyla
19/05/2014 Sheeko Gaabanmaamul
Layla iyo Qays, waa sheeko jacayl ah oo ka mida sheekooyinka ugu caansan bariga dhexe, sheekadan waxay taariikhdeedu u noqoneysaa ilaa qarnigii 7aad, Layla iyo Qeys waa sheeko sida oo kale ku faaftay Waqooyiga Afrika iyo Hindiya, hadaba Layla iyo Qeys maxay ahaayeen? Sheekadoodu sidayse u dhacday?
Nin la odhan jiray Majnuun (ninkii waalnaa) oo magaciisa caadiga ahi uu ahaa Qays ayaa Layla kula kulmay si kedis ah meel ay dumar xaflad ku lahaayeen dabadeed wuxuu bilaabay inuu geeliisii gawraco munaasibadaa haweenka awgeed, haweenkan waxaa ku jirtay Layla, Layla waxay jacayl u qaaday Qays isna mid kii la mida ayuu u qaaday, si dhakhso ah ayaa Qays u doonay Layla in uu u geed fadhiisto oo uu weydiisto aabaheed, balse nasiib daro Layla aabaheed hore ayuu nin kale ugu balan qaaday inuu inantiisa siinayo, Qays arrintaasi waa u cuntami weyday wuxuuna ku adkeystay in Layla la siiyo, halka Layla aabeheedna ku adkeystay in inantiisa uu nin kale ugu balan qaaday, Qays wuxuu noqday nin jacayl qaaday laakin inantii uu u qaaday ku hunguubay.
Qays oo jacaylka Layla uu ku dheeraa ayaa ka samri waayey dabadeed wuxuu bilaabay inuu dugaaga weheshado oo uu duurjoogta u tago.
Qays aabihii ayaa isku deyey inuu ilawsiiyo inankiisa jacaylkan haleelay balse Qays xanuunkiisii waa ka sii daray oo wuxuu noqday nin waalan oo xiskiisii ayaa raacay Layla.
Qays wuxuu u tiriyey Layla gabay badan oo uu mar ku amaanaayo, marna ku calaacalaayo, marna uu ku muujinaayo marxaladan cusub ee la soo deristay.
Gabayada Qays uu u tiriyey Layla waxay qayb ka noqdeen suugaanta Faaris iyagoo u isticmaali jiray siyaabo kala duwan, waxaa la sheegaa mararka qaar inay u isticmaali jireen hees hawleedyo.
Isla marka uu Qays ku sugnaa xaaladaas Layla waxay joogtay gurigooda oo lagu ilaalinaayey iyada oo gabayada uu tirinaayo Qays ay ka dhigeen Layla mawduuca qudha oo lagu sheekeysto iyo xanta dadka. Layla aabeheed wuxuu balan ku galay inuu Qays ka ilaaliyo Layla, qiimaha ay doonto ha ugu kacdee, waxaa la sheegaa in nin la yidhaa Ibnu Salaam u weydiistay Layla aabbeheed inuu siiyo laakin Layla aabbeheed wuxuu ninkaa u sheegay in inantiisu weli yar tahay oo uu sugo ilaa dhowr sano si ay ugu soo korto.
Qays wuxuu galay nolol adag oo silic leh, sheekadii Qays waxay gaadhay nin la odhan jiray Nezamis oo ahaa nin deeqsi ah oo sida la sheegay boqor ka ahaa dhulkii Faaris ee hada loo yaqaan Iiraan, ninkaas oo isku deyey inuu Qays la taliyo laakin markii uu kala quustay waano iyo talo ayaa la sheegaa in boqorkaa ay ka gaadhay in uu weerar ku qaado Layla reerkii ay ka dhalatay isagoo ka doonayo reerkaas in Layla iyo Qays laysa siiyo hadii kale dhiig daadan doono.
Inkastoo dagaalkii dhacay oo la jebiyey Layla qabiilkoodii hadana aabaheed wuxuu ku adkeystay in aanu marnaba Layla siin doonin Qays isagoo ku dooday in Qays dhulka dhigay oo burburiyey sharaftii Layla, wuxuuna odhan jiray dabeyl kasta oo soo dhacdaa waxay sidaa magicii inanteyda, isagoo sheegay in Layla oo uu Qays siiyaa uu ka dooranayo inuu dilo oo qudha ka jaro Layla.
Boqorkii wuxuu ogaaday in aanu ku guuleysaneyn inuu Layla aabbeheed ku qanciyo in uu isa siiyo lamaanahan isku dhibaateysan faraha ayuuna ka qaaday arrintii Layla iyo Qays, ninkii Layla loogu balan qaaday ayaa doonay inuu ka faa’ideysto jaaniskaa isagoo u yimid Layla aabaheed mar labaad, balse markan si dhib yar ayaaba Layla loo siiyey, wuxuuna Layla u kaxaystay gurigiisii. Qays markii uu maqlay in Layla nin la siiyey ayuu kasii daray wuxuuna wehel cusub ku sii yeeshay keyntii uu markii horeba dugaaga la joogay.
Qays aabihii wuxuu la dhintay murugadii iyo uur xumadii uu ka qaaday noloshii uu la dersay inankiisu isagoo Qays ahaa inanka keliya ee uu lahaa, uuna u jeclaa si aad ah. Qays markii uu maqlay in aabihii hoos maray ayuu xalkiisii ka sii xumaaday intii hore. Balse nin qoyani biyo iskama dhowro. Isaga ayaaba tisii la il daran, wuxuuna aabo ka sii dhigtay oo booskii aabihii u sii buuxshay habardugaagii uu la noolaa.
inkastoo Layla la guursaday hadana ma ay ilaawin jaceylkii Qays waxaana ku sii siyaaday jaceylkii ay Qays u haysay. Layla waxay warqad u dirtay Qays iyadoo uga tacsiyadeyneysa geerida ku timid aabihii waxaanay u sheegtay in ninkeedu ogyahay in ay Qays jeceshahay oo aanu weligeed qalbigeeda ka baxayn.
Mudo ka dib waxaaba dhimatay Qays hooyadii, Laylana waxay fariin u soo dirtay Qays iyadoo u soo dirtay nin waayeel ah una sheegay in Layla ay dooneyso in ay kulmaan. Qays waa raacay ninkii waxaana mar labaad kulmay lamaane is jeclaaday oo dhib aduunyo muquuray, Layla ninkii la siiyey wuxuu ogaa inaanu marna qalbiga Layla ka saari karin Qays.
Balse Layla ninkii la siiyey waa xanuunsaday waana dhintay. Sida dadkaa dhaqanka u ahayd gabadha carmalka ah ee laga dhintaa 2 sanno ayey ahayd inay ku jirto guriga oo aanay mudadaa rag la kulmin.
Layla iyada uma dulqaadan karto mudadaas dheer ee aanay Qays is arkeyn waanay xanuunsatay waanay dhimatay. War xumi dugsi ma fadhiistee Qays markii uu maqlay in Layla ay dhimatay oo dhulka hoos martay ayuu aad uga xumaaday wuxuuna booqday xabaasheedii, halkaasna waxaa ku soo af-jarmay noloshi Qays waxaana uu ka daba tegay Layla oo isna waa dhintay.
Inkasta oo sheekada jaceylka ah ee Layla iyo Qays ay adag tahay in si dhab ah loo helo waayo waxay dhacday qarni aad u fog haddana sidaan ayaa ugu dhow sida maanta loo weriyo.
← Libaaxii Indhaha Guduudnaa	Hadimo Jacayl →
3 thoughts on “Qays iyo Leyla”
Cabdixakiin Maxamed Sh says:
Waxaan maqli jiray jacayl xaasid ma waayo. Run ahaantii Layla aabeheed wax xun buu kataliyay. Waalidku waa inay qaddariyaan rabitaanka ilmaha ay dhaleen oo aysan sida xayawaanka ula dhaqmin.
Aad baan uga helay sheekadan mahadsanidiin.
A/rahman Ali said says:
19/10/2019 at 10:49
Mala heli karaa buugaag pdf ahaan lagula soodagi karo
09/05/2020 at 11:39
Qays gabayadiisa waxaan kusoo arkay iskuulka balse maanta waxaan arkay noloshiisa wax badan baan ka faaiday sheekadan
Leave a Reply to A/rahman Ali said	Cancel reply